Kooxaha England waa kuwa ugu lacagaha badan dunida,waase kuwa ugu liita tartamada kooxaha kale %
Kooxaha dalka Ingiriiska ayaa lagu tiriyaa kooxaha ugu awooda badan,uguna daawashada badan dunida waana sax marka dhan kasta loo fiiriyo waxaana ay dhaqaale ahaan ka badan yihiin asaagooda kale waayo xayaysiino badan ayay helaan oo ay u dheertahay tabin balaayiin doolar lagu bixiyo.
Marka halkaasi ay marayso waxaa ay awoodooda la arkaa marka ay banaanka usoo baxaan oo asaagiin wax la qaybsada la dhoho oo ay hal tartan isugu yimaadaan markaasi oo fashil ku dhoco oo dhan kasta ah,waxaana taasi loo sababayn karaa khibrad yari xiddigaha ay wataan maadaama lacag aysan dheelin tusaale ahaan in Man United iyo PSG guryahooda lagu reebay iyaga oo wata xiddigo magac iyo lacag qaali ah suuqa laga soo bixiyay taasi ayaana tusaale kuugu filan.
Bilowgii xilli ciyaareedkan bishii Semtember shan kooxood ayaa heerka guruubyada kaga qayb galayay tartanka dhaga wayne balse hada waxaa wareega sideeda jooga kaliya laba kooxood waxaana tartanka si xun loogu cirib tiray kooxaha Manchester United,Tottenham iyo Chelsea.
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham ayaa iyagana tareenka ka dhacay waxaana hada matala England Liverpool iyo City oo wax xoogaa macalin khibrad leh uu joogo inkasta in ay meel fiican gaaraan rajo badan laga lahayan.
Hadaba tartamada yurub waxa ay u baahanyihiin khibrad iyo maskax in aad dheesho waxaana tusaale kaaga filan in aad dib u daaeato ciyaarihii ay soo dheeleen kooxaha Juventus iyo Real Madrid oo kulamadoodii ay horay ula dheeleen kooxaha kale ay kaga wada badiyeen maskax iyo dagnaan waxaana la tusay kooxaha orodka badan in ay is dajiyaan oo marar badan ciyaaraan.
Dhowr iyo toban sano ku dhawaad ayaa ugu dambaysay in lagu arko Champion League in laba ama saddex kooxood oo England ah ay meelaha ugu dambeeya tartankan gaaraan waxaana la dhihi karaa waxaa ka wanaagsan horyaalada kale iskadab dalka Spian oo ugu yaraan laba kooxood sanad kasta kama dambaysta gaaraan.
W\_Q:Abdalla Hassan Baliil
Hordhaca: kulanka u dhaxeeya Kooxaha Banaadir SC iyo Gaadiidka